Yiyiphi imbonakalo yokuthengisa kwimakethi yomatshini? -Iindaba zeshishini-Hunan Zhonggu Science and Technology Co., Ltd.
Yintoni imbonakalo yokuthengisa kwimakethi yomatshini?
kwizimvo:18 umbhali: Ixesha lokushicilela: 18 imvelaphi:
2020 iwindow yokuphuhlisa umatshini kumzi-mveliso kunye nohlalutyo lwendlela.
Ngenkqubela phambili eqhubekayo yeemodeli zomatshini wokuthengisa, i Uluhlu okanye iimveliso ezinokuthengiswa zandisiwe kakhulu. I-earlnditsho oomatshini bokuthengisa ngaphakathi iTshayina kuphela sisebenze kunye iinkozo zemali okanye ezincinane imali kwaye iimveliso ezithengisiweyo bezithintelwe kwiziselo ezisezibhotileni okanye enkonkxiweyo. Kule mihla kukrelekrele oomatshini bokuthengisa ziyahambelana nonxibelelwano lwe-intanethi kunye neentlawulo mobile kwaye iimveliso ezithengisiweyo azisathintelwanga kwiziselo, amashwamshwam, ukutya kunye neemfuno zemihla ngemihla.
Oomatshini bokuthengisa izixhobo eziqhelekileyo of ukuzenzekelayo kwentengiso, basebenza ngaphandle kwemida ukusuka ixesha nendawo, gcina abasebenzi kwaye uququzelele ukuthengiselana. Bazi ikwaziwa njengeyure ezingama-24 zemini yasemarts. Umatshini othengisa umatshini usiya kwitekhnoloji yolwazi kunye nokuqhubeka kokuhlengahlengiswa.
2020 Umatshini wokuthengisa umatshini uhlalutyo
Njengomthuthi obaluleke kakhulu kwinkqubo entsha yokuthengisa, oomatshini abathengisayo banobumbano ngakumbi, bayabhetyebhetye kwaye baneemeko ezibanzi zesicelo kubandakanya izakhiwo zeofisi, iindawo zokuhamba, izikolo, iivenkile ezinkulu, iifektri njalo njalo ukubonelela ngenkonzo efanelekileyo kubathengi apho. Imakethi yomatshini wokuthengisa iya kuhlala ikhula ihamba kunye nophuculo lweli shishini kunye nophuhliso lwentlawulo yokuhamba kunye nexesha le-2019-2025 izinga lonyaka elonyukayo kulindeleke ukuba libe yi-30% ngenkxaso evela kwimigaqo-nkqubo karhulumente nakwimigaqo yoshishino.
Ngaphambili: Umzi mveliso wokuthengisa umatshini ungena kwixesha elingenamntu.
Okulandelayo: Umatshini wokuthengisa uye wagxila kuphuhliso kwintengiso yentengiso ekrelekrele kunye neemodeli zeshishini ezahlukeneyo.